Bad Things သီချင်းနဲ့ Machine Gun Kelly ~ Akhayar Lifestyle
Bad Things သီချင်းနဲ့ Machine Gun Kelly
26 May 2017 . 9:10 AM
“Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things I like
Don’t think that I can explain it …What can I say, it’s complicated “ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုတော့ ဒီခေတ်လူငယ်တိုင်း ကြားဖူး၊ နားထောင်ဖူး၊ လိုက်ညည်းဖူးကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်.. ဒီ Bad Things သီချင်းကို ရေးသားခဲ့တဲ့ အထဲမှာ Machine Gun Kelly (MGK) လည်း အပါအဝင်ပါပဲ။
Bad Things ဟာ Machine Gun Kelly (MGK )ရယ် (ဒီနေရာက စပြီး MGK လို့ ညွှန်းပါရစေ)၊ Camila Cabello တို့ ပူးပေါင်းသီဆိုထားပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာမှာ ထွက်ရှိခဲ့ကာ Billboard Hot 100 မှာ နံပါတ် ၄ နေရာထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ MGK ရဲ့ သီချင်းကောင်းတွေထဲက တစ်ပုဒ်လို့ ပြောလို့ ရပေမယ့် MGK သီချင်းစလုပ်ခဲ့တာတော့ ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။
သူ့ကို လူသိများစေခဲ့တဲ့ တခြား Wildboy ၊ Invincible ၊ Stereo ၊ Hold on (Shut up) ၊ Til I die နဲ့ A Little More လို သီချင်းကောင်းတွေ အများကြီး ထွက်ရှိထားပြီးသားပါ။၂၀၀၆ ခုနှစ်တည်းက Mixtape တစ်ခွေ စတင်ထွက်ရှိထားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ Music Career ကို စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမည်ရင်း Colson Baker လို့ ခေါ်တဲ့ MGK ဟာ ဧပြီ ၂၂၊ ၁၉၉၀ မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီကမှ ၂၇ ခုနှစ်ပြည့်ခဲ့သူပါ။ လက်ရှိတော့ Cleveland ၊ Ohio မှာ နေထိုင်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Mixtape ခွေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ စထွက်အပြီးမှာ နောက်ထပ် Mixtape ၄ ခွေ လည်း ထွက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
၂၀၁၁ခုနှစ် မှာတော့ Bad Boy နဲ့ Interscope Record တွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး “Lace Up” Album အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ ဝေဖန်သူတွေဆီက အကောင်းမြင်ဝေဖန်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ Second Studio Album “General Admission” ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တေ်ာတို့ရဲ့ MGK ကြီးဟာ ရုပ်ရှင်လည်း ရိုက်သေးတယ်ဆို ယုံပါ၊ Beyond the Lights ဆိုတဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထွက် American Romantic Drama ကားမှာ Kid Culprit ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မိသားစုဘဝဆိုရင်တော့ MGK မှာ Casie ဆိုတဲ့ ၉နှစ်အရွယ်သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ Casie လေးရဲ့ အမေနဲ့ MGK ဟာ အတူတူမနေတော့ပေမယ့် ခုထိ သူတို့နှစ်ယောက်ကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နေဆဲပါပဲ။ MGK ရဲ့ ဘဝဟာ တကယ်တော့ ချောမွေ့ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်နီးပါး သူဘိန်းဖြူစွဲခဲ့တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး “Lead You On” ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခဲ့မှုကြောင့်လည်း သူ့ကိုသူ သေကြောင်းကြံဖို့ထိတောင် စဉ်းစားခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။
DMX နဲ့ Eminem ဟာ သူ့ရဲ့ ဂီတပုံစံအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိပြီး ငယ်ငယ်ကတော့ Guns N’ Roses နဲ့ Blink-182 လို Rock Band တွေကိုလည်း နားထောင်ခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်အရတော့ သူ့ကို “Anarchist” တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရပြီး သူ ဆေးခြောက်သုံးစွဲတတ်တာကိုလည်း မခြွင်းမချန်ဝန်ခံထားတဲ့ သူဖြစ်ပါသေးတယ်။
သူ့ရဲ့ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလလောက်မှာ Hip Hop သီချင်းတွေမှာ ပါဝင်တတ်တဲ့ Model တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်၊ Rapper နဲ့ Fashion Designer တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ Amber Rose နဲ့ တွဲခဲ့တာပါ ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ အချစ်ရေးဟာ ကြာရှည်မခံခဲ့ဘဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထဲမှာ ခွာပြဲခဲ့ကြပါတော့တယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သူနဲ့ Hailee Steinfeld တို့ တွဲဆိုထားတဲ့ “At My Best” သီချင်းထွက်ရှိထားပြီး ဒီတစ်ခါလည်း ပေါက်သီချင်းဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ MGK ရဲ့ Facebook Account ကတော့ Machine Gun Kelly ဖြစ်ပြီး Twitter နဲ့ Instagram ကိုတော့ Young Gunner ဆိုတဲ့ အမည် နဲ့ အသုံးပြုနေပါတယ်လို့ အခရာပရိသတ်ကြီးကို မောင်းထု အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကြိုက်ရင်တော့ အမြန်သွား Add ကုန်ကြလော့။
Don’t think that I can explain it …What can I say, it’s complicated “ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကိုတော့ ဒီခတျေလူငယျတိုငျး ကွားဖူး၊ နားထောငျဖူး၊ လိုကျညညျးဖူးကွမှာပါ။ ဟုတျပါတယျ.. ဒီ Bad Things သီခငျြးကို ရေးသားခဲ့တဲ့ အထဲမှာ Machine Gun Kelly (MGK) လညျး အပါအဝငျပါပဲ။
Bad Things ဟာ Machine Gun Kelly (MGK )ရယျ (ဒီနရောက စပွီး MGK လို့ ညှနျးပါရစေ)၊ Camila Cabello တို့ ပူးပေါငျးသီဆိုထားပွီး ၂၀၁၆ ခုနှဈ အောကျတိုဘာမှာ ထှကျရှိခဲ့ကာ Billboard Hot 100 မှာ နံပါတျ ၄ နရောထိ ရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီသီခငျြးဟာ MGK ရဲ့ သီခငျြးကောငျးတှထေဲက တဈပုဒျလို့ ပွောလို့ ရပမေယျ့ MGK သီခငျြးစလုပျခဲ့တာ ခုမှ မဟုတျပါဘူး။
သူ့ကို လူသိမြားစခေဲ့တဲ့ တခွား Wildboy ၊ Invincible ၊ Stereo ၊ Hold on (Shut up) ၊ Til I die နဲ့ A Little More လို သီခငျြးကောငျးတှေ အမြားကွီး ထှကျရှိထားပွီးသားပါ။၂၀၀၆ ခုနှဈတညျးက Mixtape တဈခှေ စတငျထှကျရှိထားခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ Music Career ကို စတငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အမညျရငျး Colson Baker လို့ ချေါတဲ့ MGK ဟာ ဧပွီ ၂၂၊ ၁၉၉၀ မှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီကမှ ၂၇ ခုနှဈပွညျ့ခဲ့သူပါ။ လကျရှိတော့ Cleveland ၊ Ohio မှာ နထေိုငျနပေါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး Mixtape ခှကေို ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ စထှကျအပွီးမှာ နောကျထပျ Mixtape ၄ ခှေ လညျး ထှကျရှိခဲ့ပါသေးတယျ။
၂၀၁၁ခုနှဈ မှာတော့ Bad Boy နဲ့ Interscope Record တှနေဲ့ စာခြုပျခြုပျခဲ့ပွီး “Lace Up” Album အောကျတိုဘာ ၂၀၁၂ မှာ ထှကျရှိလာတဲ့အခါမှာ ဝဖေနျသူတှဆေီက အကောငျးမွငျဝဖေနျမှုတှေ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာတော့ Second Studio Album “General Admission” ထှကျရှိခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ MGK ကွီးဟာ ရုပျရှငျလညျး ရိုကျသေးတယျဆို ယုံပါ၊ Beyond the Lights ဆိုတဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှဈထှကျ American Romantic Drama ကားမှာ Kid Culprit ဆိုတဲ့ ဇာတျကောငျနရောက ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပါသေးတယျ။
မိသားစုဘဝဆိုရငျတော့ MGK မှာ Casie ဆိုတဲ့ ၉နှဈအရှယျသမီးလေးတဈယောကျရှိပါတယျ။ Casie လေးရဲ့ အမနေဲ့ MGK ဟာ အတူတူမနတေော့ပမေယျ့ ခုထိ သူတို့နှဈယောကျကွား ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျနဆေဲပါပဲ။ MGK ရဲ့ ဘဝဟာ တကယျတော့ ခြောမှခေဲ့တာ မဟုတျဘဲ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂နှဈနီးပါး သူဘိနျးဖွူစှဲခဲ့တဲ့ အကွောငျးနဲ့ ပကျသကျပွီး “Lead You On” ဆိုတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဆေးအလှနျအကြှံသုံးစှဲခဲ့မှုကွောငျ့လညျး သူ့ကိုသူ သကွေောငျးကွံဖို့ထိတောငျ စဉျးစားခဲ့ပါသေးတယျတဲ့။
DMX နဲ့ Eminem ဟာ သူ့ရဲ့ ဂီတပုံစံအပျေါ လှမျးမိုးမှုရှိပွီး ငယျငယျကတော့ Guns N’ Roses နဲ့ Blink-182 လို Rock Band တှကေိုလညျး နားထောငျခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ နိုငျငံရေးအတှေးအချေါအရတော့ သူ့ကို “Anarchist” တဈယောကျလို့ သတျမှတျလို့ ရပွီး သူ ဆေးခွောကျသုံးစှဲတတျတာကိုလညျး မခွှငျးမခနျြဝနျခံထားတဲ့ သူဖွဈပါသေးတယျ။
သူ့ရဲ့ လှုပျလှုပျခတျခတျဖွဈခဲ့တဲ့ အခဈြရေးကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ မလေလောကျမှာ Hip Hop သီခငျြးတှမှော ပါဝငျတတျတဲ့ Model တဈယောကျလညျး ဖွဈ၊ Rapper နဲ့ Fashion Designer တဈယောကျလညျး ဖွဈတဲ့ Amber Rose နဲ့ တှဲခဲ့တာပါ ၊ ဒါပမေယျ့ သူတို့ အခဈြရေးဟာ ကွာရှညျမခံခဲ့ဘဲ ၂၀၁၅ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလထဲမှာ ခှာပွဲခဲ့ကွပါတော့တယျ။
လကျရှိမှာတော့ သူနဲ့ Hailee Steinfeld တို့ တှဲဆိုထားတဲ့ “At My Best” သီခငျြးထှကျရှိထားပွီး ဒီတဈခါလညျး ပေါကျသီခငျြးဖွဈမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။ MGK ရဲ့ Facebook Account ကတော့ Machine Gun Kelly ဖွဈပွီး Twitter နဲ့ Instagram ကိုတော့ Young Gunner ဆိုတဲ့ အမညျ နဲ့ အသုံးပွုနပေါတယျလို့ အခရာပရိသတျကွီးကို မောငျးထု အသိပေးအပျပါတယျခငျဗြာ။ ကွိုကျရငျတော့ အမွနျသှား Add ကုနျကွလော့။